नेकपा विवादले सिर्जित ८ परिदृश्य | Kendrabindu Nepal Online News
नेकपा विवादले सिर्जित ८ परिदृश्य
२२ असार २०७७, सोमबार १३:५३
‘भारत, सरकार ढाल्न लागिरहेको छ र त्यसमा नेपालकै केही नेताहरुले पनि सहयोग गरिरहेका छन्’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा शुरु भएको ‘ववण्डर’ शान्त हुने छाँटकाँट अझै देखिएको छैन्।
यतिबेला ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एकअर्कालाई आरोप लगाउन व्यस्त छन् । अनि यससँगै सहमतिको कुनै सम्भावित विन्दु पहिल्याउन सकिन्छ कि भनेर पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरु क्रियाशिल छन् । यसै सन्दर्भमा आइतबार बेलुका सामाजिक संजालमा नेकपामा पाँच बुँदे सहमति हुन लागेको चर्चा चल्यो । जसमा केपी ओली पूर्णरुपले सरकार संचालनमा क्रियाशिल हुने, प्रचण्ड पूर्ण रुपमा पार्टीको काममा लाग्ने र सरकार संचालनमा माधव नेपालको नेतृत्वको एक संयन्त्र निर्माण गर्ने हो ।
सो पाँच वुँदेलाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्न सकिने अबस्था छैन् किनभने यसमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरु एकदमै तार्किक छन् र पार्टीको कुनै न कुनै तहमा यस बारेमा छलफल भएकै हुनुपर्छ । नेकपामा विवाद भईरहँदा राजनीतिमा विभिन्न दृश्यहरु देखिएका छन् जसलाई यहाँ वुँदागत रुपमा व्याख्या गरिएको छः-
१. चिनियाँ राजदुतको सक्रियता
नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्नै लाग्दा चिनियाँ राजदुतको सक्रियता एकाएक बढेको छ । उनले आइतबार बेलुका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग भेटघाट गरेकी छन् । नेपाल र चिनियाँ राजदुतकोबीचमा भेटघाट भएको नेकपाका नेता विष्णु रिजालले पुष्टी समेत गरिसकेका छन् । अहिले अन्य कुनै त्यस्तो दुईपक्षीय विषय नभएका कारण सो भेटघाट नेकपाको आन्तरिक विवादमा नै केन्द्रित भएको हुनसक्छ । यस अगाडि पनि वैशाखमा पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा चिनियाँ राजदुतले नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग श्रंखलावद्ध रुपमा भेट गरेकी थिइन् ।
२. कांग्रेससँग को मिल्ने ?
नेकपामा विवाद बढ्दै जाँदा पार्टी विभाजनसम्मको अवस्थामा पुग्ने आंकलन दुवैले गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षले काँङग्रेसँगको सहकार्यमा सरकार बनाउने मानसिकता बनाएका छन् । दुवै पक्षले यो कुरा सिधै व्यक्त नगरे पनि काँङग्रेसँगको सम्वन्ध सुधारमा भने लागेका छन् । तर काँङग्रेसले भने नेकपाभित्रको विवादमा आफू नतानिने बताईरहेको छ । तर पार्टीमा भोलि विभाजन नै आयो भने काँङग्रेस निश्चय नै ‘किङमेकर’ भने हुनेछ ।
३. भारत चुपचाप, मिडिया उग्र
सत्तारुढ दलमा विवाद बढदै जाँदा अर्काे छिमेकी मुलुक भारत भने चुपचाप छ । उसका कुनै पनि नेता र अधिकारीले कुनै पनि अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । तर भारतीय मिडिया भने ओली सरकार ढल्न लागेकोमा निकै उत्साहित देखिन्छन् । उनीहरुले नेकपाभित्रको समाचार निरन्तर दिईरहेका छन् र कतिपय स्कुप समाचार समेत दिएको दावी गरिरहेका छन् । नेकपामा केही हुने वित्तिकै नेपाली मिडिया भन्दा पहिला भारतीय पत्रकारले सूचना दिने गरेका छन् । अहिले जति भारतीय मिडियामा नेपालको बारेमा यसअघि कहिले पनि ‘कभरेज’ भएको थिएन् ।
४. एमसीसी चर्चा नै हुन छोड्यो
नेकपामा विवाद बढ्दै गएपछि वहुचर्चित एमसीसी चाँहि एकाएक सेलाएको छ । नेकपाको विवादकै कारण संसदको चालु अधिवेशन अन्त गरिएपछि एमसीसी अझै अन्योलमा परेको छ । एमसीसीको म्याद बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएपनि यो संसदीय अनुमोदन हुने नहुने अन्योलमा नै रहेको छ । त्यसैले एमसीसी तत्कालका लागि होल्डमा छ । नेकपाको विवाद तत्काल हल भएपनि एमसीसीको विषय तत्काल हल हुने देखिदैन् ।
५. राष्ट्रपति विवादमा
नेकपामा विवाद बढ्दै जाँदा राष्ट्रपति अझै विवादमा तानिने खत्तरा बढेको छ । विशेषत राष्ट्रपतिले देशको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको हितमा बढी काम गर्न थालेको चर्चा भएको छ । मन्त्रीपरिषदले निर्णय गर्नासाथ राष्ट्रपतिपतिले केही घन्टामा नै संसदको अधिवेशन अन्त गर्ने कार्यलाई धेरैले सकारात्मक रुपमा लिएको पाइदैन । विवादका कारण प्रधानमन्त्रीले अन्य कदम चाल्दा राष्ट्रपति अझै विवादमा तानिने खत्तरा बढेको छ ।
६. ओझेलमा कोरोना
काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको खत्तरा निकै बढेको छ । तर, सत्तारुढ दलको विवादले त्यसलाई पुरै ओझेलमा पारिदिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु कोरोना नियन्त्रणमा केही खटे पनि राजनीतिक नेतृत्व भने पुरै कोरानाबाट विच्छेद छ । नेकपामा नेताहरु रेष्टुरेन्टदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म भेला भईरहेका छन् ।
७. ओझेलमा भारतसँगको वार्ता
कोरोनाको कारणले लिपुलेक र कालापानीको विषयलाई पनि पुरै ओझेलमा पारेको छ । अहिले वार्ताको विषय राजनीतिक नेतृत्वको मुखबाट सुनिनै छाडेको छ । यस विषयमा भारत पनि बोलेको छैन् । न राजनीतिक नेतृत्वले भारतसँग वार्ताका लागि कुनै पहल गरेको देखिन्छ । नेपालले वार्ताको प्रस्ताव गरेपनि भारतले त्यसलाई पुरै इन्कार गर्ने गरेको छ ।
८. मन्त्रीहरुको कित्ताकाँट
यस अगाडिको नेकपा विवादमा सरकार सामेल ओली र प्रचण्ड निकट मन्त्रीहरु त्यति धेरै खुलेका थिएनन् । तर, पछिल्लो समयमा मन्त्रीहरुको किताकाँट शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै मन्त्रीहरुलाई आफ्नो कित्ता स्पष्ट पार्न आग्रह गरिरहेका छन् । त्यसैले यतिवेला को मन्त्री कोसँग नजिक भन्ने स्पष्ट भएको छ । उसो त ओलीतर्फ लागेको भनिएका गृहमन्त्री रामवहादुर थापा प्रचण्ड क्याम्पमा नै फर्किएका छन् ।
kp sharma oli, Nekapa bibad
Prevम्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घको नयाँ शाखा साईप्रसमा
चिनियाँ राजदूत यान्छी र वरिष्ठ नेता नेपालबीचको भेटवार्तापछि गरिएका अड्कलबाजीNext